All Articles - Page 11 of 38 - Shop
Barbecue လုပ်စားတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြည့်ရအောင် ?0407
The KaungHtet August 12, 2020 10:26 am August 17, 2020
အသားကင်စက်များ ဝယ်ယူရန်လင့်ခ် – Link 📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် …. Shop app ကို download ရယူရန် – http://bit.ly/2SjcJ0i …
လူငယ်တွေအတွက် ဂိမ်းကစားလို့လဲအဆင်ပြေပြီး သုံးလို့လဲကောင်းတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေဝယ်ယူတော့မယ်ဆို အဓိကသိထားရမည့်အချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ?0593
ခုခေတ်လူငယ်တွေဟာ ခေတ်နှင့် အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကြပြီး အသစ်သစ်သောနည်းပညာတွေကို စမ်းသပ်ချင်လာကြပါတယ်။ ခုဆိုရင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းတွေလဲထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ပြင်ပလောကကြီးနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်စေဖို့ ဖုန်းကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးလောက်တော့ဝယ်ထားဖို့လိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီထဲကမှာမှ ဂိမ်းကစားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြား Noteတွေ၊ Photoshop တွေ၊ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်ချင်တာတွေ စတဲ့ …
အိမ်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ… Shop.com.mm မှာရှာကြည့်လိုက်ရအောင်0331
အိမ်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရုံသာမက ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ ကြံ့ခိုင်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေဟာများသောအားဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် စျေးဝယ်တာတွေ၊ အနားယူတာတွေ၊ ထမင်းဟင်းချက်တာတွေနဲ့ကုန်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အားလပ်တဲ့အချိန်လေးတစ်ချိန်လောက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက် အိမ်မှာနေရင်း အလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပစ္စည်းလေးတွေကို …
Shop App MM ရဲ့ Shop Mart ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပေးတာလဲ?0379
The KaungHtet August 10, 2020 11:56 am January 11, 2022
Shop App MM ရဲ့ Shop Mart ဆိုတာကတော့ စားသောက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်နဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို အတန်ဆုံးစျေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချပေးတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေတင်မကပဲ ခလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလဲ Shop Mart မှာဝယ်ယူလို့ရပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဒီ Shop Mart …
အလှအပရေးရာနဲ့ ပတ်သပ်ပြီး လူမေးများတဲ့မေးခွန်းတွေကို သင်ကောဖြေနိုင်ပါ့မလား?0502
The KaungHtet August 10, 2020 11:46 am August 13, 2020
အလှကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်လင့်ခ် – Link 📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် …. Shop app ကို download ရယူရန် – Link …
နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ Shop.com.mm မှ Global Collection0396
The KaungHtet August 7, 2020 11:18 am August 7, 2020
Shop.com.mm ရဲ့ Global Collection ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်နဲ့ မှာယူနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလဲ သက်မှတ်ထားတဲ့ ရက်တွင်း ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်တဲ့ အတွက်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဝယ်ယူလို့အဆင်ပြေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် Mega Deal …
၁၀၀% ပစ္စည်းစစ်မှန်တဲ့ Shop.com.mm ရဲ့ Official Store0381
The KaungHtet August 6, 2020 10:41 am August 6, 2020
Shop.com.mm မှာ တရားဝင် နာမည်ကြီး Official Store များစွာရှိပြီး စစ်မှန်တဲ့ Brand ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Official Store မှာတော့ နာမည်ကြီးအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း အမျိုးအစားတွေ၊အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းစတဲ့ အမျိုးမျိုးသော Brand တွေကိုရောင်းချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေမှာတော့ …
အချိန်တိုအတွင်း Electronic Top Up Card တွေကို အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မယ့် Shop.com.mm ရဲ့ Top Up/Electronic Store0401
Shop.com.mm ရဲ့ Top Up/Electronic Store ဆိုတာကတော့ ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်တွေကို အပြင်သွားပြီး ဝယ်စရာမလိုပဲ VISA/ Mastercard/ JCB အစရှိတဲ့ ကဒ်တွေနဲ့အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Telenor, MPT, Ooredoo, MyTel နဲ့ …
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အထူးလျှော့စျေးများစွာနဲ့ Tech Week0297
Shop မှာ နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျဖြစ်တဲ့ Tech Week စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဟာ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Tech Week အနေအဖြစ် ငါးကြိမ်မြာက်ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Tech Weekကို ဇူလိုင်လ၇ရက်မှ၁၃ရက်နေ့အထိကျင်းပပေးမှာပဲဖြစ်ပြီး ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို ရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Tech …
Tech Week with amazing discount0285
Shop.com.mm will commence Tech Week 2020 which is the biggest online mobile and electronic sale of the year from 7th …
Previous 1 …5678910 11 12 13 14 15 16 17 … 38 Next